ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ဤနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ဘုရားသခင်က ဘ၀သစ်ကို အစပြုပေးသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်လမ်းမြတ်ကို လိုက်လျှောက်ရန်အတွက် (တရား ၁၁း၁၂) အချိန်ယူရမည်။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်။ များစွာလေ့ကျင့်သုံးရန်လိုသည်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်လျှက် ပြုံးပြနေပါက ပုံသဏ္ဍန်ပြောင်းလဲပြီဟု
Read more: ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ရမည့်ခရီးလမ်း
ခရစ်ယာန်အိမ်တောင် ၀တ်ပြုလမ်းညွန်စာစောင်။ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁၊ ညစဉ်ခွန်အား - ဆရာဆိုး
ဒေါက်တာရျောလူး .. ကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ပထမဥိးဆုံး ဆရာဝန်ဘွဲ့ (M.D) ရသောသူဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ ဆရာဝန်ဘွဲ့က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သွားသင်ယူပြီး ရလာတာပါ။ ပိုက်ဆံရှိ၍ သွားနိုင်တာမဟုတ်ပါ။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပေါ်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ပြိးမှ သွားခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကို
Read more: ခရစ်ယာန်အိမ်တောင် ၀တ်ပြုလမ်းညွန်စာစောင်။...
နှလုံးသားအိမ်မှ - ယုဒသန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် (စင်ကာပူ) Pastor's Corner
သင်းအုပ်ဆရာ Rev. စောသြဂတ်စတပ် (Jul-Aug-Sep 2011)
နှလုံးသားအိမ်မှ ခွန်အားပေး၊ ၀ိညာဉ်ရေးစာစောင်များဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုပါက
Read more: နှလုံးသားအိမ်မှ - ယုဒသန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်...
ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာ-၇ (အမွေခံသခင်) - မင်းအောင်သက်လွင်
ထိုသားတော်ကို အလုံးစုံတို့၏ အမွေခံ သခင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ သားတော်အားဖြင့်လည်း လောကဓါတ်တို့ကို တည်တော်မူ၏။ ဟေဗြဲ ၁း၂
အတိုင်းမသိ ကြီးမြတ်ထူးကဲလွန်းသော ထိုနာမတော် ရုပ်ပုံလွှာသည် ခြောက်ပေတစ်လံ သာသာ ရှိသော လူ့ဇာတိဥာဏ်ဖြင့် တွေးတောကြံဆ လက်ခံ နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာနိုင်သော အရည်အချင်းစစ်ဆေးသော စက်ကိရိယာဖြင့်ပင် မခန့်မှန်းနိုင်သော ခရစ်တော်၏ ရုပ်ပုံလွှာသည် ̏အမွေခံ သခင် ̋ ဖြစ်သည်။
Read more: ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာ-၇ (အမွေခံသခင်) -...
၀တ်ပြုရာကျမ်း၂၃ ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်၏ပွဲတော် ၇မျိုး အကြောင်းကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီကျမ်းကို စာရေးသူအရင်ကဖတ်တုံးကဆို ဆိုလိုရင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်တဲ့အတွက် ဖတ်နေပေမဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူး ပွဲနေ့တွေကိုဟိုဟာလုပ်ဒီဟာလုပ် နဲ့ဘဲရှုပ်နေတာဘဲ
Read more: ချီဆောင်ခြင်း/Rapture
ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာ-၆ ( သားဦး) - မင်းအောင်သက်လွင်
ထိုသားတော်သည် မျက်မြင် မရသော ဘုရား သခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော် ဖြစ်၏။ ဝေနေ ယျ သတ္တဝါ အပေါင်းတို့တွင်လဲ သားဦး ဖြစ်တော် မူ၏။ ကောလောသဲ ၁း၁၅
ဝေနေယျ သတ္တဝါ အပေါင်းတို့၏ သားဦး ဆိုသည့် ဘွဲ့နာမ သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း စာစောင် တွင် လူအပေါင်းကို တော်တော် လှုပ်ခတ် ဂယက်ရိုက် သွားစေသည့် နာမ ဖြစ်သည်။
Read more: ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာ-၆ ( သားဦး) -...
သခင့်စကား အမှတ်စဉ် ၁၂၁ (ဆယ်နှစ်ပြည့်)
စက်တင်ဘာလ ၂ဝ၁၁ ကို ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
သခင့်စကား ကို ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ အစောင်ရေ ၇ဝ နဲ့ စတင် ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Read more: သခင့်စကား အမှတ်စဉ် ၁၂၁ (ဆယ်နှစ်ပြည့်)
“ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကို ရသည်ဖြစ်၍၊ ခန့်ငြားကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကို လျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို စွဲလမ်းကြကုန်အံ့။”(ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈)လောက၌ ရှိသည့်အဘယ်အရာမဆို မတည်မြဲကြောင်းကို ခရစ်ယာန်တိုင်းသာမကသာမန်လူသားတိုင်းလည်း သိရှိကြမည်ဟု ထင်မှတ်ရပါသည်။ ဘုရားသခင်ကလည်းလောကအရာမှန်သမျှ မတည်မြဲကြောင်း၊ တစ်နေ့ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ဘုရားသခင်ကိုသာ ခိုလှုံကိုးစားတတ်ရန် သဘာဝဘေးများဖြစ်ကြသော မြေငလျှင်၊ဆူနာမီရေလှိုင်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ရေကြီးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် သတိပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရာတွင်ငလျှင်ဒဏ်ကိုကြိုတင်မှန်းဆပြီးမှ တည်ဆောက်တတ်ကြသော်လည်း ၂၀၁၁ မေလက ၉.၀စကေးရှိ ငလျှင်ကြောင့် ဆူနာမီလှိုင်းလုံးများဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါသည်။
Read more: မလှုပ်နိုင်သောအရာများ
U Myo San (Bangkok)
(ဆာလံ ၂၂း၉-၁၁) သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို အမိဝမ်းထဲက ဆွဲယူ၍ ၊နို့စို့သည်ကာလ၌ စိုးရိမ်ခြင်း အကြောင်း ကို ပယ်ရှင်းတော်မူ၏၊၊ အကျွန်ုပ်သည် ဘွားကတည်းကပင် လက်တော်သို့ ရောက်ပါ၏၊၊ အမိဝမ်းထဲမှ စ၍ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူပါပြီ၊၊ အကျွန်ုပ်နှင့် ဝေးဝေးနေတော်မမူပါနှင့်၊၊ ဘေးအန္တ ရာယ် ရောက်လုနီးပါပြီ၊၊ မစသောသူမရှိပါ၊၊
(ဆာလံ ၂၅း၁-၃၊၇၊၈) အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်တသလျက် နေပါ၏။
Read more: ၀ိညာဉ်ခွန်အားနည်းချိန်အတွက်ဆာလံကျမ်းပိုဒ်များ
ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင် - သြဂုတ်၂၀၁၁
ချောမိ၊ Rev.Dr ဇော်မင်း
ပညာ၏အချုပ်အချာ - ညီအစ်ကိုကြီး Dr. တင်မောင်ထွန်း
အပြစ်များလျှက်ပင်လွှတ်စေ၍ - ညီအစ်ကို ဦးကပ်ခန့်ခုပ်
ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပညာရဖို့ - ညီအစ်ကို ဦးတင်မောင်ညို
သူရဲလက်၌ရှိသောမျှားကဲ့သို့ - ညီအစ်ကိုဦးဒယ်နီယယ်
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင် - သြဂုတ်၂၀၁၁
သား... မငိုနဲ့ တော့
သား...မင်း ငိုနေတာလား။ မင်း ငိုသံကို အဖေကြားတယ်။ မင်းငိုသံဟာ အမှောင်ကို ဖောက်၊ တိမ်တိုက်တွေကို ဖြတ်သန်းပြီး ကြယ်ရောင်တွေနဲ့အတူ အဖေ့ နှလုံးသားထဲကို ရောက်ရှိလာတယ်။
ယုန်ကလေးတကောင် ထောင်ချောက်မိသွားလို့ အော်လိုက်တဲ့အသံ၊ ငှက်သားပေါက်လေးတကောင် အသိုက်အမြုံကနေ မြေပေါ်လိမ့်ကျသွားလို့ အော်လိုက်တဲ့အသံ၊ ကလေးတယောက် ရေကန်ထဲမှာ ရေနစ်နေလို့ အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အသံ၊ အဖေ့သားကြီး သွေးအလူးလူးနဲ့ ကားတိုင်ထက်က အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ အသံကို အဖေကြားတုန်းကလည်း အဖေ့ ရင်ထဲမှာ မချိအောင် ခံစားခဲ့ရတယ်။
မင်းငိုသံကိုလည်း အဖေကြားပါတယ်။ ဘာမှ မပူနဲ့ .. သား။ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေပါ... သား။
မင်းဝမ်းနည်းနေတာကို အဖေသိတယ်။ မင်းဘာကြောင့် ၀မ်းနည်းနေလဲဆိုတာကိုလည်း အဖေသိပါတယ်။
ကလေးဘ၀အရွယ်တုံးက ထားခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပျက်စီးသွားလို့ မင်း.. ငိုနေတာ မဟုတ်လား။
ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပျောက်သွားလို့ မင်း..ငိုနေတာ မဟုတ်လား။
Read more: သား... မငိုနဲ့ တော့
ငါသည် သင်၏ ဘုရားသခင်၊ ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ ဟု မိန့်တော်မူသော ဘုရားရှင်ပညတ်သည်ကား ...
၁။ ငါမှတပါး အခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။
၂။ ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုယ့်အဘို့ မလုပ်နှင့်၊ ဦးမချ၊ ၀တ် မပြုနှင့်။
၃။ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို မုသာနှင့်ဆိုင်၍ မမြွတ်ဆိုနှင့်။
၄။ ဥပုသ်နေ့ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ နေ့ရက်ကို အောက်မေ့လော့။
၅။ သင်၏ မိဘများကို ရိုသေစွာပြုလော့။
၆။ လူ့အသက်ကို မသတ်နှင့်။
၇။ သူ့မယားကို မပြစ်မှားနှင့်။
၈။ သူ့ဥစ္စာကို မခိုးနှင့်။
၉။ ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူ တဘက်၌ မမှန်သော သက်သေကို မခံနှင့်။
၁၀။ ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူ၏ ဥစ္စာပစ္စည်း တစုံတခုမှ လိုချင်သောစိတ် မရှိစေနှင့်။
Read more: အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံး၏၀မ်းမြောက်ခြင်း